युएस बंगला दुर्घटना अपडेट : आधा दर्जन बढी नेपालीको मृत्यु, यी हुन् बाँचेका ४ जना भाग्यमानी नेपाली !
ARCHIVE, SPECIAL » युएस बंगला दुर्घटना अपडेट : आधा दर्जन बढी नेपालीको मृत्यु, यी हुन् बाँचेका ४ जना भाग्यमानी नेपाली !
काठमाडौं–त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा बंगलादेशबाट आएको विमान दुर्घटनामा परेको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार रनवेमा चिप्लिएर विमान दुर्घटना भएको हो । जहाजको धावनमार्ग नजिकै जहाज दुर्घटनामा परेपछि ठुलो आगलागी भएको छ ।
दुर्घटनाबारे आएको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार विमानस्थलको टावरले युएस बंगला जहाजलाई दक्षिणबाट अवतरण गर्न अनुमति दिएपछि पाइलटले उत्तरबाट जहाज ल्याएका थिए । यहि कारण विमान दुर्घटना भएको थियो ।
दुर्घटनामा परी बिनोद राज पौडेल, बसन्त बोहोरा, सोनाम शाक्य र आसिश रंजित दुर्घटनामा परेका छन् । यी ४ को नाम बाहिर आएको छ । अन्य ३० जना नेपालीहरु पनि उक्त विमानमा थिए । आधा दर्जन बढी नेपालीको मृत्यु भएको खबर छ .